Faakiyuum-garee dhiqlaha | Let's Beat the Bed Bug!
Faakiyuumintu way caawisaa la dagaalanka dhiqlaha marka lala beegsado goobaha uu koox kooxda ugu dhuunto taasina waxay yaraysaa tidadiisa. Hase yeeshee faakiyuumintu ma dabargoyso dhiqlaha boqolkiiba boqol. Waxa jira talaabooyin muhiim ah oo aad u baahantahay inaad qaadid marka aad faakiyuumka u isticimaalaysid la dagaalanka dhiqlaha. Taasi oo kuu saamaxaysa inaad faakiyuumka la beegsatid meelaha uu ku tirada badanyahay dhiqluhu oo aad wax badan mar keliya ugu soo nuugtid adiga oo aan aqalka kusii firdhin oo kusii faafinin.
Soo nuugidu waa inay ahaataa mid awood badan leh. Isticimaal tuubada faakiyuumka la socota oo sii dheeree hadii aad u baahatid. Ogoowse dhqlihu mar marka qaarkood tuubada afkeeda, qararka iyo maryaha ama dunta ayuu kusii dhegaa oo ka lushaa, sidaas darteed ka hubi meelahaas in aan waxba ku hadhin ama ku dhuuman. Waxa suurtagal ah in mar marka qaarkood ay hawada faakiyuumku firdhiso ugxanta dhiqlaha oo aanad ku qaqabanin faakiyuumka cayayaankan.
Isku day in nawaaxiga fadhigaagu yahay meel ay alaabtu khafiif ku tahay waayo hadii dhiqle aqalka galo wuxuu helayaa meelo badan oo uu ku dhuuman karo. Shayada nadiifta ah ku rid ama ku xidhxidh baco si ay kaaga yaraadaan meelaha u baahan in la faakiyuum-gareeyo.